Otu esi amaka karịa ▷ ➡️ Chọpụta Online ▷ ➡️
Otu esi adọrọ mmasị karị
Otu esi adọrọ mmasị karị. Ọtụtụ nchọpụta na-egosi njikọ dị n'etiti ịma mma na ihe ùgwù. Onye "dịtụ mma" nwere yikarịrị ka ọ ga-enweta uru na "onye jọrọ njọ" na nke a na-adịghị mma, na-emepụta asọmpi maka onye mara mma, mara mma, nke nwere ọgụgụ isi, nke a ma ama ma ọ bụ ahụ ike.
Mana n'iburu n'uche ihe a niile, anyị ga-azarịrị ajụjụ a: Kedu ihe na-eme mmadụ ka ọ maa mma? N'isiokwu na-esonụ, anyị ga-achọpụta ihe na-eme ka mmadụ maa mma na otú ọ ga-esi ghọọ otu nzọụkwụ site nzọụkwụ. Ị ga-atụ uche ya?
1 Otu esi esi maa mma site na nzọụkwụ
2 1. Na-arụ ọrụ na ùgwù onwe onye
3 2. Nwee ihu ọchị
4 3. Nyefee charisma
5 4. Ọdịdị ahụ ga-adọrọ mmasị karị
6 5 Ịchị ọchị
7 6. Apụọ n’ìgwè
8 7. Suu ọnụ nke ọma
9 8. Nwee nkwụsi ike ego
10 9. Altruism na-adọrọ mmasị karị
11 10. Na-emega ahụ́
12 11. Yi ihe na-esi ísì ụtọ
13 12 Nchegbu
14 13. Dezie olu
15 14. Na-ekweta
16 15. Debe eze gị ọcha
17 16. Agba uhie
18 17. Mepụta ikuku nke omimi
19 18. Inwe anụ ụlọ
20 19. Mụ na ụmụ ọhụrụ na-akpakọrịta
21 20. Aha obodo
Otu esi esi maa mma site na nzọụkwụ
N'ozuzu, ndị ikom na ndị inyom na-ekweta na onye bụ na onye na-adịghị mma anụ ahụ, ọbụna n'ofe omenala na ọha otu. N'ezie ụfọdụ ụkpụrụ mma bụ eluigwe na ala N'ihi na ha na-aghọ ezi mkpụrụ ndụ ihe nketa, ahụike na ọmụmụ ọmụmụ: ahụ kwesịrị ekwesị, akpụkpọ anụ silky, ihu ihu, ntutu na-enweghị ntụpọ, ahịhịa ahịhịa, mbọ agba, ịdị arọ kwesịrị ekwesị na ịdị elu. N'ikpeazụ, e nwere ọtụtụ atụmatụ ịchọ mma bara uru N'otu aka ahụ, mana ihe ndị dị otú ahụ na-anọgide na-adị n'otu n'otu ma yie ka ha dị ntakịrị karịa ka ha na-eme n'ezie.
Mmasị mmekọahụ nke e ji mara onye na-eduhie eduhie ọ bụ ihe ụfọdụ nwere ma ndị ọzọ enweghị, ma n'ozuzu, onye ọ bụla nwere ike itinye ego na ịkwalite àgwà nke onwe ha maka nzube nke imeri. Ọ bụ ezie na ọdịdị dị mkpa karịa ihe niile na mmetụta mbụ, ihe ndị ọzọ dị ka ndụ, àgwà, àgwà na àgwà na-emetụta kpọmkwem ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda nke mmekọrịta.
E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi maa mma karịa n'ebughị ụzọ gbanwee ọdịdị gị ma ọ bụ ụdị ejiji gị. N'ihe gbasara ịma mma, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị nchọpụta na-atụ aka ihe ndị dị ndụ dị ka ihe kachasị ike na ikpebi ihe karịa ndị ọkà mmụta sayensị.
N'ihi ọtụtụ nchọpụta sayensị na nke uche gbasara mmekọahụ na mmasị, enwere ike Ụzọ 20 iji maa mma karịa:
1. Na-arụ ọrụ na ùgwù onwe onye
Nke a abụghị ndụmọdụ anyị na-enye gị, ebe ọ bụ na ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-ekwu na ka ị bụrụ sexy, ịkwesighi inwe ọmarịcha mma. Ịrụ ọrụ n'ụdị anụ ahụ na-asọpụrụ ejiji nke oge a nwere ike ime ka ị nwekwuo mmekọahụ mana ọ bụghị ihe na-ekpebi ịbụ sexy. Ihe kacha mma ị ga-eme ka ndị ọzọ mara mma bụ ntụkwasị obi na ị nwere n'ime onwe gị.
Mgbe mmadụ ji n'aka n'onwe ya ma nwee mmetụta dị mma, ọ na-enwe ike imebi ihe mgbochi nke egwu ma hapụ a obi ike na ndọta nke na-akụda ndị gbara ya gburugburu.
2. Nwee ihu ọchị
Ihe niile ụwa chọrọ onye nwere obi ụtọ. Anyị maara na ezigbo ọchị na-adọta ike dị mma na mmetụta dị mma, na mgbakwunye na inye oge afọ ojuju na obi ụtọ. Tụkwasị na nke ahụ, echiche nke ọchị na-emetụta mmetụta anyị nke ukwuu. Ọ bụrụ na obi dị anyị mma, anyị na-ekpekarị ndị ọzọ ikpe n’ụzọ dị mma karị. Ma ọ bụrụ na anyị nọ n'ọnọdụ ọjọọ, n'ezie ihe ọ bụla onye ọzọ na-eme ma ọ bụ na-eme gburugburu anyị ga-eche na ọ dị njọ.
N'okwu mmekọahụ, ndị nwere oke ọchị nwere ike inwe mmekọahụ karịa ndị na-agwụ ike. Nke a bụ n'ihi echiche nke ọchị bụ ihe kpatara ọgụgụ isi na imepụta ihe siri ike igbanwe, ihe na-enyere aka nke ukwuu mgbe ị na-ahọrọ onye òtù ọlụlụ.
3. Nyefee charisma
Ọtụtụ nchọpụta sayensị na-egosi na ndị nwere mmasị nwere ikike ka ukwuu ịmepụta synchrony, na na echiche kachasi ike maka mmata ibe ha na-etolite mgbe mmadụ abụọ nwere nzaghachi physiological nwere atụ.
N'ezie, Charisma bụ onyinye ọha mmadụ nke anyị enweghị ike ịkwụsị ịzaghachi mgbe anyị chọtara ya. Onye mara mma na-arụ ọrụ na mberede mmetụta nke obi ike na ọdịmma N'ime ndị ọzọ, nsonaazụ nke nyocha ozugbo nke anyị na-eme n'ụzọ a na-apụghị ịgbagha agbagha. Anyị nwere ike ịsị na inwe na ịnyefe amara a nwere ihe jikọrọ ya na mmetụta karịa ịma mma anụ ahụ.
4. Ọdịdị ahụ ga-adọrọ mmasị karị
N'agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị ka ọ dị adị, idowe ọnọdụ kwụ ọtọ nke ọma chọrọ nkwekọ na mmegharị ahụ na-enyefe nkwụsi ike na obi ike. N'ụzọ megidere nke ahụ, ịga ije na-agbada bụ, anthropologically, ihe ịrịba ama nke adịghị ike, ọnọdụ nke ndị na-eche banyere ịgbachitere onwe ha karịa ịwakpo; ihe ịrịba ama nke nchebe nke na-egosipụta na enweghị nchebe.
5 Ịchị ọchị
Amụma mara mma na-amasị ndị nwoke na ndị nwanyị, ma ọ bụghị otu. Ndị nchọpụta achọpụtala na ịmụmụ ọnụ ọchị dị mfe na-eme ka ụmụ nwoke mara mma karịa ka ha ga-eche ma ọ bụrụ na ha ahụghị ka ha na-amụmụ ọnụ ọchị. Nnyocha ọzọ na-adịbeghị anya na-egosi na mgbe ị na-ahụ ịmụmụ ọnụ ọchị, a na-eme ka cortex dị n'ihu na-arụ ọrụ, nke bụ otu ihe ahụ mpaghara ụbụrụ nke na-arụ ọrụ mgbe ndị mmadụ nwetara ụgwọ ọrụ.
Dị ka anyị pụrụ ịhụ, a na-enwe mgbe nile ezi ihe mere anyị ga-eji mụmụọ ọnụ ọchị.
6. Apụọ n’ìgwè
Kedu ka esi adọrọ mmasị karị n'otu ìgwè? Ọtụtụ nchọpụta sayensị na-egosi na, n'ozuzu, a na-eji ndị mmadụ kpọrọ ihe mgbe ha nọ n'ìgwè karịa mgbe ha nọ naanị ha. A na-akpọ ihe omume a “obi ụtọ” ọ na-apụtakwa n’ihi na usoro ihe anyị na-ahụ anya na-eme ka ihu ndị mmadụ dị n’otu dị nkezi kama inyocha ha n’otu n’otu. Ụkpụrụ otu a na-eme yandị mmadụ mara mma karịa n'ihi na ọ na-eleghara ezughị okè anya ma na-egosipụta ike nke onye ọ bụla n'ime otu ahụ, na-eme ka njirimara nke njirimara pụta ìhè.
7. Suu ọnụ nke ọma
Nsusu ọnụ dị mma nwere ike ime ka ị maa mma. Ọfọn, ọ dị ka mgbe ha susuru anyị ọnụ ọgụgụ anyị niile na-arụ ọrụ, e nwere a sensuality nke sensuality nke ọzọ na nke a na-emepụta a n'ezie mmetụta mmetụta njikọ.
Nsusu ọnụ nke mbụ nwere ike imebi ihe niile ị tụrụ anya ya, ebe ọ bụ na ihe ka ọtụtụ n'ụmụ nwanyị ga-ajụ nwoke ma ọ bụrụ na ha achọpụta na nsusu ọnụ adịghị mma. Ọzọkwa, a bịa n'ihe gbasara mmekọrịta, ugboro ole nsusu ọnụ bụ ihe na-egosi obi ụtọ na ihe na-adọta.
8. Nwee nkwụsi ike ego
Nkwụsi ike nke ego bụ otu n'ime nnukwu ihe na-adọta. Inwe ezigbo ego anaghị ekwe nkwa obi ụtọ ma ọ bụ kwado mmekọrịta dị ogologo oge, mana opekata mpe na-egbo nkasi obi na mkpa ihe onwunwe ndị ji ọdịmma mmadụ kpọrọ ihe. Onye nwere ezi ọnọdụ akụ na ụba na-enye mmetụta dị ukwuu nke mmesapụ aka na, karịa ihe niile, nke a na-egosi ikike ha nwere ịbụ onye na-enye ya, ihe dị mkpa iji dọta mmadụ.
9. Altruism na-adọrọ mmasị karị
Omume nke inyere ndị ọzọ aka na-akpali ịhụnanya na ntụkwasị obi. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya na-egosi na ụmụ nwanyị dị njikere inwe mmekọrịta dị ogologo oge na ndị ikom nwere obi ụtọ, ndị na-ewepụta onwe ha n'atụghị anya ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ihe ịga nke ọma na ụmụ nwanyị, wepụta onwe gị ma nwee mmesapụ aka karị!
10. Na-emega ahụ́
E gosiputara na lụmụ nwanyị na-adọrọ mmasị karịa ndị nwoke nwere ahụ ike egwuregwu karịa. Na mgbakwunye na uru nke inwe ahụ siri ike karị, omume mmega ahụ na-ewepụta endorphins, hormones na-akpali ụtọ ma na-akwalite ùgwù onwe onye. Na mgbakwunye na ihe niile dị n'elu, mmega ahụ na-arụ ọrụ na-eme ka arụmọrụ dịkwuo elu na na-akwalite mmekọ nwoke na nwanyị: A na-ahụ akụkụ nke hormonal na ọsụsọ na-eme ka ụmụ nwoke na-arụsi ọrụ ike na agụụ mmekọahụ na ụmụ nwanyị na-anabatakarị mmekọahụ.
11. Yi ihe na-esi ísì ụtọ
Ihe mbụ a na-eji mara ma ọ bụrụ na mmadụ mara mma bụ echiche, ma isi bụ uche nke na-akpali mmetụta miri emi. Ihe na-emekarị bụ na ndị na-esi ísì ụtọ na-amasị anyị n'ihi na nke a pụtara ịdị ọcha, ahụike na ịdị ọcha onwe onye. N'aka nke ọzọ, ndị na-esi ísì ụtọ na-atụ aro otu enweghị mmasị na enweghị mmasị n'ebe ibe ya nọ.
Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-adọrọ mmasị na ísì anụ ahụ, ísì anụ ahụ na-akpalite homonụ na-adọta ndị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe maka ebumnuche ọmụmụ. Ụfọdụ ihe na-esi ísì ụtọ agwakọta na ísì anụ ahụ nwere ike ịmepụta mmetụta dị mma na-adịte aka na-akwado mmasị, ya mere ọ bara uru iji ihe na-esi ísì ụtọ.
Ụmụ nwanyị na-ahụ nke ahụ Ndị ikom na-enwechaghị nchekasị na-adọrọ mmasị karị karịa ndị na-emegide ha, ebe ọ bụ na ha na-enwe ike ịnagide ọnọdụ ndị siri ike na-enweghị mmetụta uche nke uche. Nke a na-egosi na ha nwere ezigbo mkpụrụ ndụ ihe nketa nke nwere ike ibunye ụmụ ha n'ọdịnihu.
13. Dezie olu
Nke njikọ dị n'etiti ụda olu na ịma mma mmekọahụ. Ejikọtara ụda ige ntị na mmekọahụ, na ụda na mgbịrịgba ndị anyị na-emepụta nwere mmetụta ụfọdụ na-adọta ndị mmekọ. Ụmụ nwoke na-amasịkarị ụmụ nwanyị nwere olu dị elu n'ihi na ọ na-egosi na ha nwere ahụ dị nta ma bụrụ nke a na-enwekarị ike. N'aka nke ọzọ, ụmụ nwanyị na-ahọrọ ndị ikom nwere olu miri emidị ka nke a na-ewusi ike nwoke ya ike.
Ndị mmadụ na-adọrọ mmasị na-enwekwu nghọta, n'otu akụkụ, n'ihi na ha na-enwekarị ike ịzụlite àgwà ndị bụ isi (dị ka ọgụgụ isi na nkà mkparịta ụka) na-eme ka ha na-ekwurịta okwu nke ọma.
Ndị mmadụ na-eme ka mmadụ kwenye na-eji ịma mma ha dọta uche na kpalie ndị ọzọ ime ihe, ọha mmadụ ma ọ bụ ọkachamara. Ọzọkwa, e gosiri na ndị na-ekwenye ekwenye na-adọrọ mmasị karị n'ihi na ha na-ekwu okwu nke ọma.
15. Debe eze gị ọcha
una ezé ọcha n'otu n'otu na kwekọọ na-eme ka ndị mmadụ mara mma karị. Ọfọn, ọ dị ka ezé bụ ihe ịrịba ama nke ahụike mkpụrụ ndụ ihe nketa na-enyere aka ịhọrọ ezigbo ndị mmekọ.
16. Agba uhie
Enwere ụfọdụ mmekọrịta sayensị n'etiti mmekọahụ na agba uhie. Ndị nchọpụta na-egosi na ndị mmadụ na-aghọta nke a agba uhie dị ka akara nke ike, na ihe kpatara ya nwere ike ịdabere n'azụ ihe ndị metụtara ndụ na omenala ọha.
N'ọtụtụ omenala ọwụwa anyanwụ dị ka China, Japan, na India, dịka ọmụmaatụ, uhie na-enye ọkwa dị mkpa na ịdị ukwuu. Na Rom oge ochie, ụcha ọbara ọbara mere ka a mata ndị kasị ike bụ́ ndị nọ n’ọkwá dị elu. Na okwu ndu, maka umu nwoke alfa, agba uhie na-anọchi anya elu.
17. Mepụta ikuku nke omimi
Ihe omimi bụ ihe na-adọta, ebe ọ na-enwe mmetụta na-akpali akpali n'ọchịchọ mmadụ. Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ na-ezochi ụfọdụ ozi na-emepụta atụmanya na-akpali akpali bụ ndị mara mma ọ bụrụhaala na ọ dị ụtọ ikpughe ihe nzuzo ya. Ọzọkwa, ụmụ mmadụ na-achọkarị ihe ha na-enweghị ma ọ bụ enweghị ike inwe.
Mgbe anyị na-achọ onye ejighị n'aka banyere onye ahụ nwere ike ime ka anyị nwee mmasị n'ebe ha nọ. Ma anyị kwesịrị ịkpachara anya, anyị agaghị etinye onwe anyị kpamkpam n'ime ikuku nke ihe omimi n'ihi na ọ nwere ike ime ka anyị ghara iru eru, nke na-eme ka ohere onye nke ọzọ nwee ike ịda mbà.
18. Inwe anụ ụlọ
Ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-adọrọ mmasị ndị ọzọ nwere anụ ụlọ. Nnyocha na-egosi na inwe anụmanụ dị ka enyi na-emetụta echiche nke ọrụ, uche, mmesapụ aka na ọmịiko.
19. Mụ na ụmụ ọhụrụ na-akpakọrịta
Dị ka ọ na-adịkarị n'ebe nkịta nọ, mmekọrịta ya na ụmụ ọhụrụ bụkwa ihe na-adọta, karịsịa maka ụmụ nwoke. Dị ka nnyocha e mere na-egosi, ndị ikom ndị ha na ụmụ ọhụrụ na-akpakọrịta nwere ike inweta nọmba ekwentị nwanyị okpukpu atọ karịa ndị na-eleghara nwa ọhụrụ anya.
N'izugbe, ụmụ nwanyị na-ewere ndị nwoke na ụmụ ọhụrụ na-emekọ ihe dị ka ihe mara mma. Echiche nke nsonaazụ a bụ na omume ọma na ụmụ ọhụrụ na-egosi ọchịchọ ịmụ ụmụ n'ọdịnihu.
20. Aha obodo
Ihe niile a dị n'elu abaghị uru ma ọ bụrụ na aha ọha anyị na-adịghị mma. Anyị aghaghị ịrụ ọrụ n'ịbụ ndị ezi mmadụ, inyere ndị ọzọ aka, na imesapụ aka iji nweta aha ọma. Nke a ga-eme ka anyị mara mma na ịga nke ọma n'ịhụnanya.
N'isiokwu a, anyị enyela gị igodo niile ịmara ka esi adọrọ mmasị karị. Site chọpụtara.online Anyị na-atụ anya na ndụmọdụ anyị niile ga-enyere gị aka ime nke ọma.